Obama oo digniin u diray Dimuqraadiyiinta isbedel doonka Mareykanka | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Obama oo digniin u diray Dimuqraadiyiinta isbedel doonka Mareykanka
Obama oo digniin u diray Dimuqraadiyiinta isbedel doonka Mareykanka
Madaxweynihii hore dalka Maerykanka Barack Obama ayaa digniin u diray musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga, waxa uuna uga digay siyaasadaha aan xaqiiqda ku saleysnayn.
Mr Obama ayaa sheegay in Dimuqraadiyiinta ay khatar ugu jiraan inay lumiyaan codbixiyaasha. Madaxweynihii hore oo ka hadlayay munaasabad dhaqaale lagu uruurinayay ayaa waxa uu sheegay in codbixiyaal badan aysan doonayn in habka siyaasadeed la baabi’iyo .
Mr Obama ayaanan intii uu ka hadlayay munaasabadda carrabaabin musharax qaas ah sidoo kalana ma uusan dhaleeceyn siyaasi gooni ah, taasi bedelkeedana waxa uu isticmaalay erayo uu ku boorinayo dimuqraadiyiinta oo dhan oo ay ka mid ahaayeen: ”fiiro gaar ah u yeelo cod bixiyayaasha” adigoo diiradda saaraya arrimaha la xiriira daryeelka caafimaadka iyo soogalootiga.
Mr Obama, oo Aqalaka Cad ka arriminayay intii u dhaxeysay sannadadii 2009-kii ilaa iyo 2017-kii ayaa sheegay in dalka uusan u baahanayn isbedel weyn balse uu u baahan yahay hormarinada ay shacabka daneeynayaan.